हरेक स्थानीय तहमा पाल टेलिकमको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
मंसिर २४, २०७६ ०७:५२:२८
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले हरेक स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने भएको छ ।
कम्पनीको पहुँच नपुगेका बाँकी स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु¥याइने प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले आफ्नो छुट्टै परियोजनाका रूपमा इन्टरनेट विस्तारको काम अगाडि बढाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो । यसको सर्वेक्षणको काम करिब पूरा भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर छिटै कार्यान्वयनमा जान्छौँ । व्यावसायिक कम्पनी भए पनि सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रूपमा हरेक जनतालाई सेवा पु¥याउनुपर्ने दायित्व भएकोले इन्टरनेट विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३१४ तहमा मात्रै टेलिकमको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ । टेलिकमले अबको परियोजनामा बाँकी रहेका स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु¥याउने छ । काम सुरु भएको करिब एक वर्षभित्रै हरेक तहमा इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको कम्पनीका ब्याकबोन प्रसारण निर्देशनालयका उपप्रबन्धक विमल आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि करिब आठ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
टेलिकमले सम्भव भएका स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबरमार्फत र नभएका तहमा माइक्रोवेभमार्फत इन्टरनेट पु¥याउने छ । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा दस जीबी क्षमताको ब्याकबोन टेलिकमले तयार गर्ने छ । हिमाली जिल्लाका केही स्थानमा भने सुरुमा न्यूनतम अर्थात् ५१२ केबीपीएसको ब्रोडब्यान्ड पु¥याइने आचार्यले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा पु¥याइने इन्टरनेट खासगरी सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध गराइनेछ । टेलिकमले ति स्थानमा प्रारम्भमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने छ ।
टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट उपलब्ध गराएको करिब पाँच अर्ब रुपियाँ लगानीमा प्रदेश १, २ र ३ मा मध्यपहाडी लोकमार्गहुँदै हरेक जिल्लाको सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाएको छ । देशैभर इन्टरनेट पु¥याउने सरकारी नीतिअन्तर्गत सुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल बिछ्याउने परियोजनाअन्तर्गत टेलिकमले तीनवटा प्रदेशको जिम्मा पाएको थियो । प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउन कम्पनीहरू छनोट भइसकेको र यसै हप्ताभित्र राउटर खरिदको विषयमा पनि सम्झौता हुनेछ ।
अबको बढीमा दुई वर्षभित्र उक्त परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी टेलिकमलाई छ । त्यस्तै देशैभर फोरजी विस्तारका लागि नेटवर्क र कोरका लागि कम्पनीहरूसँग सम्झौता भइसकेको र अहिले उपकरण आयात गर्ने क्रम जारी रहेको पनि अधिकारीले बताउनुभयो । टेलिकमले एक वर्षभित्र ६५ लाख क्षमताको देशैभर फोरजी विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६, ०९:०४:००
वर्ल्डलिंकको हिटरनेट अफर : यो जाडोमा नेट जोड्दा हिटर पाइने
वर्ल्डलिंकको दशैं अफर : एक बर्षको इन्टरनेटमा ३२ इन्चको टिभी उपहार !
वर्ल्डलिंकको नयाँ अफर : अब हरेक टिभीमा युट्युब चल्छ
क्रिकेट विश्वकप : सुबिसुको इन्टरनेट र क्लियर टिभीमा आकर्षक मुल्य
रोबर्टले चलायो कार्यक्रम
बैशाख २९, २०७६ हेटौंडा खबर
‘अनरेवल मिनिस्टर फर एजुकेसन, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी गिरिराजमणि पोखरेल यु आर वेलकम इन द इनागुरेसन सेरेमनी अफ साइन्स म्युजियम’ अतिथिहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ड्यासमा उधिएकी मानवयन्त्र (रोबर्ट)ले जब यसरी सम्बोधन गरिन्, कार्यक्रममा उपस्थित सबै शान्त भएर सुन्न थाले । अतिथिहरुलाई एक एक गरेर नाम लिँदै मञ्चमा बोलाउन थालेपछि कानेखुसी गरेकाहरुको ध्यान पनि मञ्चतर्फ ने मोडियो । कार्यक्रम सञ्चालनमा खटिएकी थिइन्, हाक्पटासीमा सजिएकी फूलमाया । पुरा पढ्नुहोस्
तीव्र गतिको इन्टरनेट चलाउन पाउँदा खुशी
बैशाख २४, २०७६ हेटौंडा खबर
गलकोट नगरपालिका–१० रमुवाका रेशम राना मोबाइलमा तीव्र गतिको इन्टरनेट चलाउन पाउँदा खुशी हुनुहुन्छ । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट चलाउन प्रयोग हुने अत्याधुनिक ‘थ्रिजी’ सेवा शुरु गरेपछि रमुवावासीलाई इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहज बनेको हो । ‘टुजी’लाई स्तरोन्नति गरी ‘थ्रिजी’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल टेलिकम बागलुङले जनाएको छ । रमुवामा गत वर्षमात्र मोबाइल सेवा पुगेकोहो । डेढ सय घरधुरी रहेको रमुवामा चाप कम भएका कारण इन्टरनेट तीव्र र स्तरीय छ । बडिगाड गाउँपालिका–८ खोलाखर्कमा पनि ‘थ्रिजी’ विस्तार भएको कार्यालयका वरिष्ठ इञ्जिनीयर केशव शर्माले बताउनुभयो । खोलाखर्कका झण्डै चार सय घरधुरी उक्त सेवाबाट लाभान्वित छन् । पुरा पढ्नुहोस्
माछा पोखरीमा डुबेर बालकको ज्यान गयो मंसिर २४, २०७६ 16
पुरुष फुटबलमा नेपाल विजयी
आगो ताप्दै सुत्ने क्रममा बृद्धको ज्यान गयो
चरेससहित एक पक्राउ
यसकारण गर्न हुँदैन आफ्नै गोत्रभित्र विहे
अवैध घरेलु मदिरा भट्टी नष्ट
नलकटुवा पेस्तोलसहित १ भारतीय पक्राउ
अस्पतालमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, चारजनाको ज्यान गयो
हट अवतारमा पोर्नस्टार मंसिर २३, २०७६
यसकारण ‘पत्तासाफ’ भयो सौगातको फिल्म ‘माछा माछा’ मंसिर २२, २०७६
नयाँ लुक्समा यस्ता देखिए अभिनेता आमिर खान मंसिर २२, २०७६
'बक्सर' को रुपमा ट्रम्पको नयाँ अवतार !
कुकुरले बचायो आफ्नो मालिकको ज्यान ।
सरकारी जागिरका लागि दिनरात पढेको पढ्यै भएपछि पत्नीले घर छाडेर माइत हिँडीन्